You are here: Home Culture and Arts Culture Badhkii!
Waa abbaaro 10:00kii habeennimo. Goobtaas caado uma ay ahayn in wakhtigaas dad badani ku soo ururaan. Markaan shan boqol oo tallaabo u jiro ayaan arkay hummaagga dad tiradooda aanan wakhtigaa sixi karin, bal se himbiriirsi ahaan faro badan. Madowga habeennimo iyo iftiinka oo ku yar goobta awgeed, ma awoodi karayn maskaxdu in ay qummaati u saxdo tirada rasmiga ah ee dadka iyo ujeeddada ay ku urureen. In kasta oo aan tallaabada hoosta ka xadayay, si aan u gaadho goobta, haddana intaanan u dhaawaninba, waxa isa soo taray buuq iyo muran. “Iyada weydiiya, iyadaa ka mas’uul ah, maxaa isaga u geeyay?” iyo ereyo la mid ah ayaa dhegahayga ku soo duulay. Waxa uu u muuqday cod wiil dhallinyaro ah. Waxaan laban-laabay xawaarihii tallaabada. Halka ay ka hadlayaan fogaa, miyay sii durkaysaa, mooyi!. Intii aanan cabbaarba sii socon, waxa xigay dhawaaqa siidhiga iyo sawaxanka codadka is-dhaafaya ee dulucdoodu muranka tahay.
Ilaa saddex boqol oo tallaabo markaan u jiray, ayaan xusuustay in aan kaba dheereeyay oo aan ka tegay rag aanu wakhtigaa wada soconnay, haddiiba aan dib jalleecay, show maba soo dhawa ee waan ka goostay socodka. Iyaga waan ka tegay wakhtigaas, mana gaadhin halkii aan ku degdegayay ee lagu buuqsanaa. “Tolow ma cid baa meesha lagu dilay, dilku buuq yaraa! Haddaa maxaa Siidhiga iyo Ciidanka keenay? Mooyi.” Waa qaar ka mid ah ereyadii ay maskaxdaydu ku sii tallamaysay intaan socday. Muranka qayb ka mid ahi waabu soo dhawaaday, xaggayga ayuu u soo socdaa! Tallaabadaan dhimay, si aan u hubiyo waxa jira. “Wuu ka qaaday oo ii dhiib ayuu yidhi, balse markii dambe ayuu damaaciyay,” Waa weedho ay isugu jiibinayaan wiil yar, wiil kale oo dhalinyaro ah iyo laba haween ahi, qiyaastiina u muuqda in ay buuqa dadka soo raaceen, bal se ay dib isaga noqonayaan. Mid ka mid ahi wuxu sitaa bud, halka haweenkuna ay si hal-haleel iyo degdeg ka muuqdo ay u hagoognaayeen waxay huwanaayeen.
Goobtii ayaan soo gaadhay, waa mid ka mid ah Saldhigyada magaalada Hargeysa, waxa is-haysta dad tiro badan oo xaafad-xaafad isku laayay, waxaana dhex-dhexaadinaya oo qaar ka mid ah wakhtigaas xidhaya Ciidamada Booliska oo iyana isu-habar-wacday. “Waagu ha u baryo ee horta xidha, waar idinkuna nagala taga buuqa,” ayuu yidhi mid ka mid ah askartii goobta joogtay ee dadka xidhay. Waxa goobta buuxa dad u badan dhalinyaro rag ah, kamana madhnayn hablo qudhoodu.
Qofkii iigu dhawaa, ayaan weydiiyay waxa dhacay ee intan oo dad ah loo xidh-xidhayo, bal se iima soo celin jawaab I qancisa. Waxaan se su’aashii mid la mid ah la gaadhay mid ka mid ah askartii goobta joogtay oo aanu is-weji garanaynaynay, ku-ye, “Waa dad is-haysta, waanay is-laayeen, waxaanay isku haystaan oo ay isku laayeen waxaanan garanayn oo aan la iskuba layn,” hase ahaatee, markiiba askari kale ayaa u dhawaaqay oo uu dhankiisa u dhaqaaqay. Aniga oo aan ku qancin jawaabtaas, ayaaban maqlay dadkii oo garramaya. “Isagaa iga qaaday oo wuxuu igu yidhi, aan kuu eego, markii dambena wuu I dafiray. Markaan weydiiyayna wuu I caayay,” waxa sidaa ku gar-dhiganaya wiil dhalinyaro ah. “Muxuu kaa qaaday,” ayuu weydiiyay dembi-baadhihii kiiska qorayay, ku ye, “Kaadh (Memory Card) 1GB BADHKII,” Askarigii ma fahmine, wuxuu kii u xigay weydiiyay, “Muxuu ina yidhi immika?”, “Wuxuu ku yidhi, kaadhka Tilifoonka gacanta ee Moobillada la geliyo oo 500MB ah, ayuu iga qaaday,” ayuu ku jawaabay Askarigii kale.
Yaabka yaabkii! Bal qiimee, waa 10:00 habeenimo, waxa la joogaa saldhig oo qaarkood la xidhayaa, waxa la isku haystaa oo la isku laayay Kaadh yar, waliba 500MB ah, qiime ahaan noqonaya 17,000 oo Somaliland Shilin ah, una dhiganta ilaa 3 Dollar. Waxa intaa dheer, ma jiro muhiimad uu Telefoonku u fadhisto ama u shaqayn waayo oo uu qabtaa, kaliya in wax lagu kaydiyo.